Indreto avy Rahelimalala Charlisse Raheliarisoa Pierrette Charlotte Raharimalala Jeanne Ratsimbazafy Jean Dieudonné Jean Ratsimbazafy René
Indreto avy Randrianatoandro Samüel Ravahison Raymond Randriamanantsoa David Raveloarimanana Aimée Randrianakoto Joseph Ravahiniarisoa Esther Ravaoarisoa Louise Randriamanana Daniel Rakotomanana Jean Randrianasolo Benjamin Ramanantenasoa Noëline Rakotonirina Emmanuel Rakotomalala Jacques Ratoandroarilala Jacqueline Rafarasoa Sahondra Rasendrasoa Voahirana Raheliarisoa Ernestine (-08-1972)
Indreto avy Tantaran'Ambohipeno FP/FJKM Ambohipeno RJBte & Marie Ankorona Esther
Indreto avy Gazety TIR Tononkalo Hiran'ny T.I.R.
Ito boky ito
60667 visiteurs - 131639 pages vues
Mpanatontosa : raradora@yahoo.fr
Namatsy : Andry Rasolofo & Awelty
18 – Bebe mahay mandamin-draharaha
Raha i Bebe sy ny fitaizana ny ankizy no hotantaraina dia misy betsaka no azo ambara. Ny tsapa aloha dia Andriamanitra mihitsy no nanampy azy teo amin’ny fanefana izany adidy masina izany satria i Dadabe moa, isaky ny miakatra izy sisa vao tena afaka mifanome tanana mivantana amin’i Bebe eo amin’izany fanabeazana ny zanaka amam-para izany.
Na dia tsy nianatra “Economie domestique” aza i Bebe, izany hoe momba ny fitantanana ny ao an-tokantrano, dia hita fa havanana amin’izany izy ary mahay mandamin-draharaha tokoa.
Ohatra : voatsinjarany amin’ny antsipiriany avokoa ny anjara asan’ny ankizy tsirairay ao an-trano : ity mahandro sakafo, iroa manasa lovia, izato mantsaka, ny kelikely mamafa tokotany, sns… sns… Tsy misy mifanjàna na mifampiandriandry intsony amin’izay. Vita affichage (peta-drindrina) daholo izany rehetra izany ary misolosolo isam-bolana.
Tsy dia nananosarotra tamin’ny ankizy koa moa izany fandaminana izany satria saiky niray sekoly avokoa ny ankamaroany, tao amin’ny Ecole Chrétienne Ankadifotsy, am-pitan’ny Librairie Volomparasy ankehitriny io no nisy azy, saingy efa tsy misokatra intsony izy izao, efa ela no nikatona ; sady akaikin’ny trano fonenana rahateo izany Sekoly izany. Nenitoa Ralisy no tsy tafaraka tamin’ny be sy ny maro tao fa natao kilasimandry tany Ambatobevanja aloha izy tamin’ny voalohany, nefa dia nihananatona an’Ankadifotsy ihany nony tatý aoriana satria nampidirina nianatra tao amin’ny Sekoly Advantista–Ambatomitsangana izay lasa hoe : Lycée Privé Andrianarisoa amin’izao fotoana izao. I Dadatoa Jean-Marie koa tany amin’ny Sekoly LMS–Ambatonakanga aloha no nalefa nianatra. Mbola tampohin’ny nipetraka eto Antananarivo angamba izy tamin’izany ka isaky ny vao tonga kelikely fotsiny avy mianatra maraina dia efa mitady hanainga sahady hamonjy ny fianaran-kariva, sao diso fidirana, hono ; ny vary antoandro anefa amin’izany mbola tsy masaka akory. Koa dia naleon’i Bebe izy nampidirina nianatra tao amin’ny Ecole Chrétienne Ankadifotsy ihany koa. I Dadatoa Rasoanaivo kosa dia nalefa nianatra sténo-dactylo-comptabilité tao amin’ny Sekolin-dRatefiarison teny Ambohijatovo.
Tsara lazaina ihany fa anisan’ny antony nisafidianana ny Ecole Chrétienne Ankadifotsy dia satria, tsy vitan’ny hoe akaikin’ny trano fonenana fotsiny, fa ny Tale tao, Ralaivoavy Paul, dia Tsimihety avy any akaikin’ny Mandritsara any, ka noraisiny tsara tokoa ny ankizy nony fantany fa hoe miasa any amin’ny faritany Tsimihety ny ray aman-drenin’izy ireo, sady mba mahazo “réduction” koa eo amin’ny saram-pianarana satria maro mianadahy no indray mianatra ao.
Hita amin’izany rehetra izany fa na dia ny fifantenana ny Sekoly hianaran’ny ankizy fotsiny ihany aza dia efa hahitana taratra fa mahay mandamin-draharaha tokoa i Bebe.
Izay ny momba ny Sekoly fa raha iverenana ny fandaminana ny ao an-tokantrano dia vatran’i Bebe hatramin’ny manao affichage ny laoka hatao sakafo. Ohatra hoe : akoho ny alahady, anamamy sy hena ny Alatsinainy, trondro ny Talata, lasopy ny Alarobia, sns… sns… Toy izany koa ny laoka amin’ny sakafo hariva. Dia miovaova isam-bolana koa izany.
Fa mbola miovaova toy izany ihany koa ny fipetraky ny fanaka samihafa ao amin’ny efitrano, hany ka toy ny manana endrika vaovao hatrany ny bikan’ilay efitrano rahefa miditra ao. Ohatra : ny farafara fandriana : mbetika mianavara-doha, mbetika miantsinanan-doha ; ny latabatra sy ny seza : indraindray eroa amin’ny lafin-drindrina andrefana, indraindray etsy amin’ny lafiny atsimo, sns… sns… Fanaon’i Bebe ihany koa ny mandalotra matetika ny trano, na ny atiny na ny ivelany. Ny loko fotsy sy mavo no tena mba tiany amin’izany. Mbola tamin’ny fotoanan’ny fahamoran-javatra koa moa ka dia azony natao tsara izany !
Manaraka indray : azo ambara fa mbola porofon’ny fahaizan’i Bebe mandamin-draharaha ny fanomezany andraikitra ny ankizy. Efa voalaza tany aloha ny fitsinjarana ny asan’ny tsirairay ao an-tokantrano ; fa izay tiana hambara eto dia omeny andraikitra manokana ny zokinjokiny hiambina sy hikarakara ny zandrinjandriny : mandamina ny fitafiany ao am-bata, mampiakanjo azy rahefa handeha hianatra na handeha hiangona, manadin-desona sy mijery ny devoarany, sns… sns…
Nizotra tsara izany na dia tsy mitovy aza indraindray ny tadin-dokanga sy ny fomba fihevitry ny zokinjokiny sy ny zandrinjandriny. Ohatra amin’izay mba sendra tsaroana ity anankiray ity : Lasa nandeha niantsena any Analakely i Bebe indray andro. Maharitraritra izy no any ka dia nohafarany izy efa-bavy lehibe hiambina tsara azy roalahikely, dia i Dadatoa Donné sy Dadafara René. Vantany vao lasa anefa i Bebe dia voahidy tsy mahazo mivoaka ny trano ireto farany, nefa mba te-hilalao mafy eny an-tokotany, fa hoe mandoto akanjo, hono, raha milalao eny an-tokotany. Sendra avy kosa moa ny orana ny alin’io ka manao somary petsapetsa ihany ny tokotany. Dia eo am-baravarankely sisa no hany herin’izy roalahikely mipitrapitra mijery azy efa-bavy (Nenitoa Ralisy, Nenitoa Rahely, Nenitoa Beby, Nenifara Jeanne) mikorana sy manokon-dresaka eo an-tokotany miaraka amin’i Nenitoa Christine, zanak’i Dadanaivo Christopher, izay tonga namangy tao tamin’izay.
Na izany aza anefa, mahay mifanaraka tsara ny ankizy. Matetika, rahefa tonga, ohatra, ny Asabotsy, andro tsy fianarana, dia indreny izy rehetra, miara-midina amin’iny arabe mankany Ambodivona iny, ny sasany amin’ny vehivavy miloloha sobika feno lamba hosasana, ny sasany mitondra koveta, seau, akalana. Mbola honahona be mantsy iny ambanin’Ambodivona iny tamin’izany, nefa misy faritra misy rano madio azo hanasan-damba ihany koa. Ny vehivavy moa manasa lamba eo ; izy 2 lahikely kosa manarampo milalao eny rehetra eny mandra-pahavitan’ny sasa lamba ; mbola tsy nisy accident natahorana teny tamin’izany satria tsy mbola nisy araben’aotomobilina tamin’iny faritra ambany iny fa lalan-kely fotsiny. I Dadatoa Jean-Marie kosa mandritra izany fotoana izany, mandeha lavidavitra kokoa, lasa manao baolina any amin’ny namany any.
"Tsy tsara raha irery ..."